Wasiirka Amniga Kenya oo soo gaaray Muqdisho. - Awdinle Online
Wasiirka Amniga Kenya oo soo gaaray Muqdisho.
March 8, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirka amniga gudaha Dalka Kenya Fred Matiang’i, ayaa maanta oo Axad ah soo gaaray Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya isaga oo la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Mr Matiang’i, ayaa sheegay in safarkiisa Muqdisho uu xiriir la leeyahay dhacdooyin todobaadkii hore ka dhacay sohdibnta labada dal islamarkaana quseeya amaanka Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa uu sheegay in safarkiisa Muqdisho ay ku wehliyaan Saraakiil sar sare oo ka mid ah dowladda Kenya Madaxweynaha Soomaaliyana kala hadlayaan arrinta Gobolka Gedo.
Wasiirka amniga Gudaha Dalka Kenya oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in safarkooda Muqdisho uu amray Madaxwyenaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Jimcihii la soo dhaafay Madaxweynaha Soomaaliya iyo dhiggiisa Kenya ayaa khadka Taleefanka uga wadahadlay arrinta Gobolka Gedo,waxaana labada Madaxweyne isku afgarteen in ay sameeyaan guddi ka shaqeeya dajinta xaaladda Gobolka Gedo iyo Mandheera sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay baraha bulshada ee Madaxtooyada Soomaaliya.
Arrintan ayaa la xiriirta dagaalka sohdinta Mandheera iyo Beledxaawo todobaadkii hore ku dhexmaray Ciidamada Dowladda Federaalka ah iyo Ciidan taabacsan Wasiirka amniga Jubaland kaas oo ay raadineyso Dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya horay uga dalbatay in ay ku wareejiso Wasiir Janan hayeeshee Kenya ayaa ku doodday in dalabkaas aan loo marin habka diblomaasiyadeed ee Daaha gadaashiisa lagu wada hadlo.
Previous articleAl-Shabaab oo goob fagaaro ah ku toogtay nin horay dil bareer ah u geystay
Next articleFarriin loo direy Hay’adaha Garsoorka mamulka Puntland